Quotes-yada ugu Wanaagsan ee Taageerayaasha Dragon Ball Z Taageerayaashu way Qaddarin Doonaan - Kale
22+ Quater Quotes Dragon Ball Z Taageerayaasha Ayaa Qaddarin Doona
“Robot doqon ah. Runtii ma waxaad u malaynaysaa inaad fursad ku haysato Super Saiyan sideyda oo kale ah? Maskaxdaadu waa inay cilladaysan tahay. ” - Khudradda
Kaliya 1 raadinta google ee 'Vegeta' waxay keeneysaa in kabadan 25 milyan natiijooyin. Cadaynaysa sidee caan ku tahay Vegeta wuxuu ku jiraa adduunka Anime.
Isagu waa wax yar oo isla weyn, nasiib badan, laakiin caqli badan, caqli badan, iyo xeelad weyn. Iyo istiraatiijiyad, sidoo kale.
In kasta oo xigashooyin badan oo khudradda ahi ay yihiin wax lagu qoslo, haddana waxa jira qaar ka mid ah xigashooyinka khudradda ee caqliga iyo dhiirrigelinta leh.
Taasi waa nooca ninka uu yahay markaad ka fikirto.
Aynu eegno qaar ka mid ah Khadadka ugu fiican ee Vegeta gudaha Dragon Ball Z / DB Super.
1. Xigashooyinka Khudradda
Kama baqayo caqabadan cusub. Halkii dagaalyahan dhab ah waxaan u kici doonaa inaan la kulmo. - Khudradda
“Awooddu waa waxa kaliya ee adduunkan ka jira. Wax kasta oo kale waxay u yihiin dhalanteed kuwa daciifka ah. ” - Khudradda
Weligaa ha u dirin wiil inuu sameeyo shaqooyinka ragga. ” - Khudradda
Waxaa jira hal hubaal oo keliya nolosha. Nin xoog leh ayaa kor istaaga oo wax walba ka adkaada! - Khudradda
Waad maamuli kartaa maskaxdayda iyo jidhkayga, laakiin waxaa jira hal shay oo Saiyan had iyo jeer ilaaliyo - Kibirkiisa! - Khudradda
anime ugu xumaa qiimeeyay waqtiga oo dhan
'Waligay kuuma siin doono adiga circus freaks!' - Khudradda
Sideen ugu ogalaan karaa inay tani ku dhacdo wiilkayga? Wax walba wuu ii huray! Aniguna waxba kamaan qaban isaga mooyee! - Khudradda
Mar kasta oo aan gaaro heer cusub oo xoog ah, awood weyn ayaa umuuqata inay caqabad ku tahay awooddayda. Waxay u egtahay in qaddarku igu qoslayo qosol nacas weyn, sida Kakarot oo kale. ' - Khudradda
“Kakarot… Fadlan… Burburi Frieza… Wuxuu iga dhigay waxaan ahay… Ha u ogolaan him ha u sameeyo… cid kale. Wax kastoo ay ku qaadato… Jooji… Fadlan. ” - Khudradda
'Dogob, Bulma, tan baan kuu samaynayaa. Haa, xitaa adiga, Kakarot. ” - Khudradda
“Ma jiraan wax la yiraahdo cadaalad ama cadaalad daro dagaalka. Kaliya waxaa jirta guul ama kiiskaaga, guuldarro. ” - Khudradda
“Aaway sharaftiinnu? Sida dhammaan Saiyan-dhiig-saafi ah, Kakarot wuxuu ka doorbidayaa inuu dhinto dagaalka halkii uu ka guuleysan lahaa mid ka mid ah kuwa digirta sharaf-darrada ah ee loo yaqaan 'senzu digris' oo ah qorikiisa! Kakarot wuxuu ku tababbaray qolka waqtiga suuxdinta sida aan sameynay. Haddaba aan aragno wuxuu sameyn karo! - Khudradda
Xitaa dagaalyahannadii ugu xoogga badnaa waxay la kulmaan cabsi. Waxa iyaga ka dhiga dagaalyahan dhab ah waa geesinimada ay leeyihiin si ay uga adkaadaan cabsidooda. ” - Khudradda
Xanuunka riix, inaad ka quusato xanuun badan ayaa ku haya. ” - Khudradda
'Maya, ma waayi karo!' - Khudradda
“Maxaa khaldan Frieza? Maskaxdaadu ma waxay ka mid tahay muruqyadaada daciifka ah ee ka hooseeya? - Khudradda
'Dogob, weligay kuuma duugin adiga oo ilmo ah… ii oggolow inaan ku duleeyo.' - Khudradda
Aan ku weydiiyee. Mashiin sidaada oo kale ah weligaa cabsi ma la kulantaa? - Khudradda
“Kakarot, aad baad u qurux badan tahay. Marnaba fursad uma aan istaagin Buu, adigaa ah kan keliya ee isaga la dagaallami kara. Waxaan u maleynayaa inaan ugu dambeyn fahmay sida indheergarad aniga oo kale ah uusan kaaga dhaafi karin. Waxaan u maleeyay inay tahay inaad haysato wax aad difaacdo. Waxaan u maleynayay in darawalkaaga inuu kaa ilaaliyo inuu kuu ogolaaday inaad ka faa'iideysato awoodahaaga… tan ayaa laga yaabaa inay sabab ahayd, laakiin aniga xitaa ma haysto waditaankan Waxaan u dagaalamay inaan sameeyo sidaan rabo, maxaa yeelay waxay ahayd madadaalo inaan dilo cadaawayaashayda oo aan quudiyaa hankayga. Laakiin wuu ka duwan yahay, wuxuu la dagaallamaa inuusan guuleysan laakiin maxaa yeelay isagu gebi ahaanba ma lumin doono, taasoo u horseedaysa inuu jebiyo xaddidiisa runtiina uusan dan ka lahayn cidda ka soo horjeedaa. Marka markuu i dilin, waxay ahayd maxaa yeelay wuxuu arkay inaan daryeeli karo kuwa kale, sida aan hadda sameeyo… Go Kakarot, waxaad tahay lambarka koowaad! ' - Khudradda
“Way igu adag tahay inaan aamino in unugyadaydu ku jiraan jirkaaga. Sideed ku noqon lahayd sidan foosha xun? Maxaa qashin ah. In kasta oo, ay iska caddahay halka aad xooggaaga badan ka heshay. ” - Khudradda
“Gabi ahaanba wuu i garaacay. Marka hore ficilkiisa iyo ka dib wiilkiisa. Oo muxuu halkan iigu reebay? Sidee? Sideed sidaas ugu dhiman kartaa? Sidee, Kakarot? Marnaba fursad uma heli doono… inaan ku caddeeyo xooggayga adiga kaa soo horjeeda. Waxaad u dhimatay cabsi la'aan. Maxay taasi aniga iga dhigaysaa? Dagaalyahan ma ihi. Mar dambena ma dagaalami doono. ” - Khudradda
'Diyaar ma u tahay hada inaad markhaati ka noqoto awood aan la arkin kumanaan sano?' - Khudradda
Maxay yihiin xigashooyinka khudradda aad ugu jeceshahay?
60 Ka Mid ah Hadalladii Ugu Wanaagsanaa ee Ball Ball Z ee Wakhtiga oo dhan
Xigashooyinka Sheeko-Xirfadeedka Ugu Halyeeyga Badan